जुनीचाँदेको केन्द्र विवाद : जनप्रतिनिधिबीच जुहारी, जनतालाई सास्ती- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
माघ ८, २०७६ भीमबहादुर सिंह
(जाजरकोट) — जुनीचाँदे गाउँपालिकाको केन्द्र विवाद नटुंगिदा सेवा प्रवाह र पूर्वाधार विकासमा समस्या भएको छ । केन्द्र विवादका कारण गाउँपालिकाको सबै कामकाज तीन वर्षदेखि सदरमुकाम खलंगाबाटै भइरहेको छ ।
केन्द्र विवादसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । मुद्दा डेढ वर्षदेखि विचाराधीन छ । सर्वोच्चले फैसला गर्न ढिलाइ गर्दा जुनीचाँदेको ‘सिंहदरबार’ खलंगा केन्द्रित बनेको हो । स्थानीयबासी लामो समयदेखि सरकारी सेवा लिन सदरमुकाम आउन बाध्य छन् । गाउँपालिकाको केन्द्र लुहादह वा पराले कहाँ राख्ने भन्नेबारे जनप्रतिनिधिबीच विवाद जारी छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्ण केसीलगायत जनप्रतिनिधिले दुईतिहाइ बहुमतबाट केन्द्र लुहादह तोकेको दाबी गर्दै आएका छन् । वडा नं. ९ का अध्यक्ष रामबहादुर शाहीलगायत जनप्रतिनिधिले केन्द्र तोक्दा किर्ते हस्ताक्षरबाट दुईतिहाइ पुर्‍याएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । स्थानीय तहको निर्वाचन भएको ६ महिनाभित्र सामान्य बहुमतले केन्द्र तोक्ने निर्णय गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । कानुनी प्रावधानअनुसार ६ महिना कटेपछि केन्द्र तोक्न गाउँसभाको दुईतिहाइ बहुमतले निर्णय गर्नुपर्छ । निर्वाचन भएको ६ महिनापछि भएको गाउँसभाको दुईतिहाइ बहुमतले लुहादह केन्द्र तोक्ने निर्णय गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष केसीको भनाइ छ । उनले २०७५ बैशाख ३० गतेको विशेष गाउँसभाको बैठकबाट उक्त निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।
दुबै पक्षका जनप्रतिनिधिबीचको लामो विवादका कारण सेवाप्रवाह र विकास निर्माणका काममा समस्या देखिएको स्थानीयको गुनासो छ । निर्वाचनको समयमा ‘गाउँमा सिंहदरबार आउने’ भनिए पनि सामान्य कामका लागि पनि सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता नहटेको जुनीचाँदे–३ परालेकी लक्ष्मी शाहीले बताइन् । ‘गाउँमा कार्यालय भए छिटोछरितो सरकारी सेवा पाइन्थ्यो, विकास निर्माणका कामले तीव्रता पाउँथे,’ उनले भनिन्, ‘विवादकै कारण हामीले अहिलेसम्म स्थानीय सरकारको अनुभूति नै गर्न पाएका छैनौं ।’ सामान्य सिफारिस बनाउन पनि सदरमुकाम आउनुपर्दा सास्ती भोग्नुपरेको उनले बताइन् । सदरमुकाम आउजाउ र होटेल बासमै कम्तिमा ८/१० हजार रुपैयाँ खर्च हुने उनले गुनासो गरिन् ।
स्थानीय तह घोषणा गर्दा सरकारले जुनीचाँदेको अस्थायी केन्द्र पराले तोकेको थियो । केन्द्र विवादका कारण दुई वर्षदेखि कर्मचारी गाउँ जान सकेका छैनन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले पटकपटक सरकारले तोकेको गाउँपालिकाको केन्द्र परालेमा गएर काम गर्न ताकेता गरे पनि गाउँ जान नसकेको कर्मचारीको गुनासो छ । दुवै पक्षको विवादले खलंगामै बसेर सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सर्बदल शाहीले बताए । ‘केन्द्र विवादकै कारण विकास–निर्माणका अधिकांश कामकाज प्रभावित छन्,’ उनले भने, ‘गाउँपालिकाकै भवनलगायत अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा समस्या भएको छ ।’
गाउँपालिका केन्द्रको विषयमा सत्तारुढ नेकपाका नेता र जनप्रतिनिधि पनि विभाजित छन् । अध्यक्ष केसीले पूर्वएमालेका जनप्रतिनिधिले बहुमतको निर्णय नमान्ने चेष्टा गरेको आरोप लगाए । ‘दुईतिहाइले पारित गरेको निर्णय हो,’ उनले भने, ‘गाउँपालिकाको केन्द्र लुहादहबाहेक अन्यत्र हुनै सक्दैन ।’
लुहादहमा निर्णय भएको भनेर गलत प्रचार भएको वडाध्यक्ष शाहीले बताए । ‘किर्ते हस्ताक्षर गरेर वहुमत पुगेको हल्ला गरिएको हो,’ उनले भने, ‘अब हामी सर्वोच्चको निर्णयको प्रतिक्षामा छौं ।’ उनले गाउँपालिकाका ५७ जनप्रतिनिधिमध्ये २२ जना लुहादहको विपक्षमा रहेको दाबी गरे ।
प्रकाशित : माघ ८, २०७६ १०:३३
‘आगो नबाली बस्न सकिँदैन’
माघ ८, २०७६ वसन्तप्रताप सिंह, तृप्ति शाही
बझाङ,बैतडी — लगातारको हिमपात र वर्षाले ह्वात्तै जाडो बढ्दा सुदूरपश्चिम पहाडको जनजीवन प्रभावित भएको छ । डेढ महिना अवधिमा यहाँ ५ पटकभन्दा बढी हिमपात भइसकेको छ । जाडो बढेपछि स्थानीयको दैनिक कामकाज ठप्पप्रायः भएको छ । उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगका विद्यालय बन्द भएका छन् । चिसोले हिमाली भेगका बासिन्दा बढी समस्यामा छन् ।
ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दा घरभित्र आगो तापेर बसिरहेका भेटिन्छन् । बजार क्षेत्रका बासिन्दा पनि चोक र गल्लीहरूमा बिहानदेखि साँझसम्म आगोमै झुम्मिरहेका देखिन्छन् । कतिपय जिल्लामा प्रहरी र स्थानीय तहले सामूहिक रुपमा आगो ताप्नका लागि दाउरा दिन थालेका छन् । ‘बिहान र साँझ घाँसदाउरा र पानीपँधेरो गर्न समस्या छ,’ बझाङ दौलीचौरकी प्रमिला बोहराले भनिन्, ‘आगो नबाली बस्न सकिँदैन ।’
अघिल्ला वर्षमा माघ सुरु हुनासाथ घमाइला दिन हुन्थे । यो वर्ष दुई दशकयताकै बढी हिमपात भएकाले जाडो बढेको हुनसक्ने स्थानीयको अनुमान छ । हिमपात निरन्तर भइरहेकाले बझाङको साइपाल, सुर्मा गाउँपालिका र बुङगल नगरपालिकाको हिमाली भेगको तापक्रम माइनसभन्दा तल झरेको छ । चिसोले ससाना बालबालिका र वृद्धवृद्धा धेरै प्रभावित छन् । बालबालिका बिरामी पर्न थालेको बझाङ कोटदेवलकी सरिता खड्काले बताइन् । विपन्न वर्गका घरपरिवारलाई झन् सास्ती थपिएको छ । ओढ्ने र ओछ्याउने गतिलो नहुँदा रातभर राम्रोसँग सुत्न नसकेको थलाराका गाउँपालिकामा रहेका हलिया परिवारकी ज्ञानादेवी दमाईले बताइन् । ‘कतिबेला घाम लाग्ला भनेर कुरेर बस्ने गरेका छ्रौ,’ उनले भनिन् । यहाँ १७ परिवार हलियाको बसोबास छ ।
जाडो बढेसँगै बालबालिकामा निमोनिया र वृद्धवद्धामा दमको संक्रमण बढिरहेको जिल्ला अस्पताल बैतडीका मेडिकल अधिकृत डा. वसन्तराज जोशीले बताए । ‘बिरामीको चाप बढेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले दैनिक ओपीडीमा ५५ जना र आकस्मिक कक्षमा १० जना हाराहारीमा बिरामी आइरहेका छन् । यीमध्ये धेरैजसो चिसोसम्बन्धी रोगका बिरामी हुन्छन् ।’ उनले दैनिक ५ जना बिरामीलाई भर्ना गरेर उपचार गर्नुपरेको बताए ।
जिल्ला अस्पताल बझाङ पनि बिरामीको संख्या बढेको प्रमुख सन्दीप ओखेडाले जानकारी दिए । चिसोमा आगो ताप्ने र धुँवाले दम र निमोनियाका रोगीहरूको रोग बिथोलिने भएकाले सचेत हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । चिसो बढेसँगै दाउराको मूल्य पनि बढेको छ । बझाङ सदरमुकाम चैनपुरमा ग्यास चलनमा आएसँगै गर्मीयाममा प्रायः ठप्पजस्तै हुने दाउराको व्यापार जाडो बढेसँगै फस्टाएको दाउरा व्यापारीहरूले बताए ।
दौलीचौरको पटुडीबाट दाउरा बेच्न आएकी सखी बोहराले भनिन्, ‘अहिले जति मूल्य भने पनि विक्री हुन्छ ।’ एक महिना अघिसम्म ४ सयसम्ममा पाइने प्रतिभारि दाउराको मूल्य अहिले ६ सयसम्म पुगेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीले जिल्लाका विभिन्न सार्वजनिकस्थलमा आगो ताप्ने व्यवस्था मिलाएको छ । स्थानीय तह, वन डिभिजनलगायतका कार्यालयसँग मिलेर बैतडी प्रहरीले बसपार्क, बजारका चोकमा आगो ताप्नका लागि दाउरा वितरण गर्न थालेको हो ।
गोठालापानी बजार, देहिमाण्डौं, सत्बाज, पाटन, गोकुलेश्वर लगायत यात्रु र स्थानीयको बढी भीडभाड हुने ठाउँमा दाउरा वितरण गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रमुख डिल्लीनारायण पाण्डेयले बताए । यस्तै, डडेलधुराका बजार क्षेत्रका स्थानीयलाई निःशुल्क दाउरा वितरण गर्न थालिएको सशस्त्र प्रहरी बल डडेलधुराका डीएसपी भुवनराज पन्तले जानकारी दिए ।
प्रकाशित : माघ ८, २०७६ १०:२८